Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: #OromoProtests Duula Diddaa Bittaa Gurgurtaa ilaalchisee xalayaa hogganoota mana hidhaa Qilinxoo irraa ergame.
#OromoProtests Duula Diddaa Bittaa Gurgurtaa ilaalchisee xalayaa hogganoota mana hidhaa Qilinxoo irraa ergame.
(xalayaa hogganoota mana hidhaa Qilinxoo irraa ergame.)
Waggaan baranaa kun yoomiyyuu caalaa ilmaan keenya kan itti dhabane, kumaatamoonni kan itti hidhaman, hedduun as buuteen isaanii kan itti dhabame waan ta'eef lammiilee keenya kanneen yaadachuuf guyyoota gaddaa labsineef deebii ajaa'ibsiisaa kennitanii jirtu.Gocha kanaan diinni na'eera. Nutiifi sabni keenya boonneerra. Quuqamaafi jaalala ummata keessaniif jecha gatii guddaa kafaltanii deebii waamicha keenyaaf laattaniif kabaja isinii qabnuufii galata keenya isinii dhiheessuu barbaada Galatoomaa, ulfaadhaa.
Yoo waldhageenye, walitti birmannee, walbira dhaabbanne salphinni nurra jiru kun nurra hin bubbulu, bubbulus hin qabu. Tokkoon tokkoon qajjiisa funyoo morma keenyatti maramee jiru kukkunnee hanga bilisoomnutti waldhaga'uufii walbira dhaabbachuun keenya itti haa fufuu jechuudhaan waamicha biraa qabannee dhihaachuun dirqama nutti ta'ee jira.
Akkuma beektan har'as ajjeechan nurraa hin dhaabbanne, hidhaan itri fufee jira, Ambulaansonni deessotaaf kadhaan biyyoota alaa irraa argaman dargaggoota keenya akka allaattii butanii fiiguuf gandeen keenya keessa wal maruu itti fufanii jiru. Haati ilma deesse har'aas imimmaan ishee hin qoorre. Maqaan maastar pilaanii yoo ka'uu baateeyyuu har'aas ummata keenya lafa isaa irraa buqqisuun hin raawwanne.
Namoonni ilmaan keenya ajjeesan seeratti nuu haa dhihaatan jennee osoo gaafachaa jirruu dheengadda hagayya 16 Muummichi ministeeraa ifatti badhaafamanii jiru. Manni maree jiddu galeessa ADWUI hagayya 18 - 22 tti yaada yeroo irratti marii gaggeessen waa'ee daangaa Tigraayifii naannoo Amaaraa ilaalchisee hiika itti kennuuf murtii dabarsee jira. Karaa biraa garuu waggaa tokko guutuf nagaya dhabiinsaaf sababa kan ta'eefii wareegama lubbuu hedduu kan gaafate dhimmi maastar pilaanii daangaa waliin kan walitti qabate ta'uusaa osoo beekuu maqaallee osoon dhahin bira darbee jira.
Mata dureen kun osoo hin ka'in hafuunsaa yoo xiqqaate waan sadii nutti garsiisa.
1ffaa, Ajjeechaan ummata keenya irratti raawwate sirrii ta'uu isaafii akka itti fufu murtaa'uu isaa agarsiisa.
2ffaa, ummanni kun humaa fiduu hin danda'u jedhamee tuffatamuu isaa mul'isa.
3ffaa, paartii biyya bitu sana keessa bakka bu'aan ummata oromoo kan hin jirre ta'uusaa agarsiisa. Eeyyee kan nuu falmu hin jiru.
Uffata haaraa bitannee nyaata gaarii nyaannee dhugaatii gaarii dhugnee ergaa "baga geessee" walii dabarsinee bakka bashannanaa deemnee gammachuun dabarsuuf sababa hin qabnu. Haala kanaan yoo dabarsine fooniifii dhiiga ilmaan keenyaa akka soorannetti lakkaawama. Ummanni bilisummaa hin qabne wantoota akkanaa raawwachuun irraa fokkisa, nituffachiisaas. Tokko tokkoon qarshii harka keenyaa bahu eenyu harka gala? Maaliif oola laata? Naanna'ee naanna'ee rasaasa ilmaan keenya ittiin du'an bita, mana hidhaa isaan itti hidhaman ijaara, abbootii irree aangoo irra tursa, nuun ammoo bilisummaa keenya dheeressa.
Kanaaf diinagdeen qaama qabsoo keenyaa ta'uu qaba. Diinatti ulee kenninee na hin rukutin jennee kadhachuu dhaabuu qabna.
Wanti bilisummaa keenyaf hin taane qarshiin tokkolleen bahuu hin qabu, homaa nugochuu hin dandeessan jedhee mootummaa nutti dhaadatu waa gochuu akka dandeenyu yeroon itti agarsiisan amma ta'uu qaba. Karaa diinagdee malli ittiin mootummaa kanarra dhiibbaa gahan hedduutu jira. Ammatti kanneen armaan gadii hojirra akka oolchitaniif lafee ilmaan oromoo nuuf jecha wareegamaniin waamicha isinii dabarsina.
Jalbultiin ayyaanaa kun yeroo itti ummanni keenya fedha isaaniitin ofsaamsisaniidha. Saamicha kana baroota dheeraaf keessummeessinee jirra amma garuu raawwachuu qaba. Guyyaa ergaan kun isin dhaqqabee kaasee hamma bituu diduufii gurguruu diduudhaan humna harka keessan keessa jiru agarsiisaa. Gurraachonni Ameerikaa konkolaachisaan adiin tokko dubartii gurraattii tokko adiif akka iddoo gadidhiiftu ajajee isheen didnaan morma qabee gadi darbate. Gurraachonni salphina kana fala dhaabbachuuf guyyaa tokkoof otoobus yaabuu lagachuuf murteessanii garuu guyyoota 381ffaa miila isaaniin deemuudhaan ulfina isaanii deeffatan. Nutimmoo salphina kana caalu baannee maalif waan qabnu facaasaa deemna? Gaandiin ummanni Indiyaa uffata warra biritish lagatee jibrii foo'atee, dhahee akka uffatu gochuudhaan saba isaa bilisummaa gonfachiiseera. Nutis midhaan keenya, jimaa keenya, buna keenya, horii keenya, damma keenya, dhadhaa keenya, walumaa galatti oomisha keenya gabaa baasuu dhiisudhaan akkasumas meeshaalee , uffata , nyaataa fi dhugaatii bituu dhiisuudhan badiinsa nutti deemaa jiru haa hir'isnuu.
Mee guyyatti keessumaa yeroo ayyaanaa, nama dubbisuuf , sirba filachuuf, gaaffii gaafachuuf , gaaffii deebisuuf , marii irratti qooda fudhachuuf , baga geessee namaa dhaamuuf, kkf qarshii meeqa akka baafnu yaadaa. Isaan kun ummata bilisummaa hin qabneef barbaachisoodhaa? Mee isa guyyatti baaftan kana ammoo ummata keenya akkuma kana raawwatan yoo xiqqaate miiliyoona 15 ta'u meeqa akka baasu tilmaamaa. Kun hundi rasaasa ittiin duunu bituuf ykn nama nu'ajjeesu badhaasuf ooluu danda'a. Kana duwwaa miti. Dargaggoota keenya maqaaf mana murtitti deddeebi'aa jiran irratti ragaa ta'ee dhiihaachaa kan jiru ragaa teeleeti. Kanaaf haalli humnaa olii yoo numudate malee teelee lagachuudhaan maallaqa keenya haa qusannuu, bilisummaa keenya haa saffisnuu, adaba irraas haa oolluu.
Karaalee mootummaan ittiin maallaqa saamu keessaa tokko lootorii bifaafii maqaa adda addaa qabaniini. Kanaaf lootorii biyyoolessaas ta'ee kanneen achumatti soofanii carraa ofii ilaallatan bituu lagachuudhaan qabsoo karaa diinagdee keessatti qooda fudhadhaa.
Akkuma hundumti keessan hubachuu dandeessan malli qabsoo nuti eegalle kun biyya kana keessatti baay'inaan hojirra kan oolee miti. Wareegama xixiqqaas kan nama baasisu ta'ee mul'achuu danda'a. Osoo uffata bitachuu danda'anii isuma duraan qaban qulqulleeffatanii yoo tarsa'es hodhatanii ittiin ayyaana oolun hin beekkamne. Waggaa haaraa ittoo lukkuu, Foon , dhugaatii malee simachuunis hin baratamne. Garuu jalqabamuu qaba. Wanti nurraa barbaadamu waan xiqqoodha, oftoo'achuu, fedhii ofii daangessuu, dhiibbaa aadaa fi ollaa jalaa bahuu, Qabsaa'aa kaayyoo qabu ta'uudha.
Mirga argachuuf wareegama kafaluun haaraa miti. Sabni aarsaa osoo hin baasin abbaa mirgaa ta'e hin jiru. Waggaa kana ummanni keenya tokko ta'ee seenaa hojjatee jira. Ammallee hanga cunqursaan nurraa kufutti malleen biroo heddutti fayyadamnee qabsoo keenya itti haa fufnuu. Har'aas borus diinagdeen qaama qabsoo keenyaa ta'ee itti fufa. Dhimma kana ummata hubachiisuuf dargaggoota irraa hedduutu eegama. Kan bilisummaa keenyaaf hin fayyadne qashii tokkollee hin baasnu!!
Posted by Hasan Ismail at 3:21 AM